Ny Holland America's Rotterdam dia tranombakoka zavakanto mitsingevana mitentina 4.1 tapitrisa dolara
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny Holland America's Rotterdam dia tranombakoka zavakanto mitsingevana mitentina 4.1 tapitrisa dolara
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny Holland America's Rotterdam dia tranombakoka zavakanto mitsingevana mitentina 4.1 tapitrisa dolara.
Ny Holland America Line's Rotterdam dia tranombakoka any an-dranomasina misy sangan'asa 2,645 isan-karazany manomboka amin'ny $ 500 ka hatramin'ny $ 620,000 izay mivelatra amin'ny tokotanin-tsambo, efitranom-panjakana ary efitrano fandraisam-bahiny.
Maherin'ny 2,500 ny sanganasa avy amin'ny mpanakanto eran-tany am-polony no manatsara ny endrika anatiny ao Rotterdam.
Mitentina 4.1 tapitrisa dolara mahery ny fanangonan-kanto an'i Rotterdam ary nokarakarain'ny YSA Design monina any Oslo sy ArtLink any Londres.
Firenena 37 mahery no misolo tena ny mpanakanto ao Rotterdam, miaraka amin'ny mpandray anjara betsaka indrindra avy any Holandy, Etazonia ary Royaume-Uni.
Line Line Holland Efa ela no noheverina ho tranombakoka mitsingevana ny sambo noho ny fanangonam-bokatra tsara kalitaon'ny tranombakoka. Rahoviana Rotterdam Niondrana voalohany tamin'ny 20 oktobra 2021, ny vahiny dia ao anatin'ny dia mahafa-po amin'ny maso miaraka amin'ireo sangan'asa mampieritreritra sy manaitra ary feno fahasahiana indrindra ao anatin'ilay andian-tsambo — anisan'izany ireo asa manan-tantara sy fahatsiarovana avy amin'ireo sambo rahavavy malala teo aloha.
RotterdamMitentina 4.1 tapitrisa dolara mahery ny fanangonan-kanto an'i Oslo ary nokarakarain'ny YSA Design monina any Oslo sy ArtLink any Londres, izay niara-niasa tamin'ny tranoben'ny trano fandraisam-bahiny Tihany Design. Ny vokatr'izany dia tranombakoka an-dranomasina misy sanganasa 2,645 isan-karazany manomboka amin'ny $ 500 ka hatramin'ny $ 620,000 mitentina $ XNUMX izay mivelatra amin'ny tokotanin-tsambo, efitranom-panjakana ary efitrano fitahirizana.
Firenena 37 mahery no misolo tena azy RotterdamMpanakanto, miaraka amin'ny mpandray anjara betsaka indrindra avy any Holandy, Etazonia ary Royaume-Uni. Ny mpanakanto koa dia avy any Arzantina, Aostralia, Aotrisy, Belzika, Brezila, Kanada, Shina, Repoblika Tseky, Danemark, Repoblika Dominikanina, Estonia, Failandy, Frantsa, Alemaina, Gresy, Hongria, Islandy, Israely, Italia, Repoblikan'i Korea, Norvezy, Filipina, Polonina, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Serbia, Espaina, Soeda, Soisa, Torkia ary Ukraine.
Maro amin'ireo sanganasa no mifantoka amin'ny fialamboly, mampiseho lohahevitry ny mozika, ny dihy ary ny hetsika, manenona ny fitantaran'ny sambo momba ny “feo vaovao mitsambikina” ho ao anatin'ny zavakanto. Ny asa dia amin'ny haino aman-jery maro, anisan'izany ny sary, sary hosodoko, haino aman-jery mifangaro, sary, printy ary sary sokitra.